फेसबुकमा पर्‍यो लभ, जब भेट्न पुगे युवा युवती, देख्ने बित्तिकै किन भयो यति ठूलो ववाल? – Kavrepati
Home / समाचार / फेसबुकमा पर्‍यो लभ, जब भेट्न पुगे युवा युवती, देख्ने बित्तिकै किन भयो यति ठूलो ववाल?
admin July 29, 2021	समाचार Leaveacomment 329 Views
फेसबुक अहिलेको चल्तीको सामाजिक सञ्जाल हो । यहाँ धेरैको प्रेम हुन्छ भने कतिको फेसबुकबाटै बिछोड पनि भएको पाइन्छ । तर एक यस्तो घटना बाहिर आएको छ । जुन मानिसहरुले थाहा पाएपछि यस्तो पनि हुन्छ र? भन्दै अचम्ममा पर्छन् ।
Previous बिजय शाहीले हामिलाई थाङ्नामा सुताउनुको पछाडी ऋषि धमला, रबी लामिछाने र भाग्य न्यौपाको ठुलो हात छ भन्दै खुल्यो यस्तो रहस्य – भिडियो सहित
Next यस्ता महिलालाई हुन्छ पाठेघर क्यान्सरको जोखिम, यी संकेत देखा परे वेवास्ता नगर्नुहोस्